Maxay tahay digniinta uu maanta gobolka Benaadir u direy shacabka Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay digniinta uu maanta gobolka Benaadir u direy shacabka Muqdisho?
Maxay tahay digniinta uu maanta gobolka Benaadir u direy shacabka Muqdisho?
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha gobolka Benaadir, Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) oo sidoo kalena ah Duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta dadweynaha gobolka Benaadir u direy digniin culus, kadib kormeer uu saaka ku tagay xeebta Curubo ee degmada Shangaani.
Guddoomiyaha gobolka ayaa shacabka uga digay inay qashin ku shubaan goobaha qaar ee magaalada, midaasi oo keeni karta caafimaad darro iyo inay hoos u dhacdo bilicdii caasimadda.